Archives tag: samsung
Dom » Entries tagged with "samsung"
Samsung dia manome smartphone sy fiambenana miaraka amin'ny drôna!
Samsung, miaraka amin'ireo haitao maoderina, any Irlandy dia nanomboka nanome ny mpampiasa azy ireo finday avo lenta sy famantaranandro marani-tsaina amin'ny fomba tena tsy mahazatra - amin'ny alàlan'ny drôna. Samsung dia mampiditra endrika fanaterana vaovao! Efa ela i Samsung no nieritreritra ny hampiditra ...
Fanadihadiana Samsung: Inona no antenain'ny Poloney amin'ny milina fanasan-damba maoderina?
Ny milina fanasan-damba sy ny fanamainana vita tamina faharanitan-tsaina artifisialy, ny haitao hafa mampihena ny fotoana fanasana sady mitazona fahombiazana ary mamela ny fikolokoloana tsara kokoa ny tontolo iainana hanaitra ny fahalianana bebe kokoa amin'ny Poloney. Inona koa no jeren'ny mpanjifa rehefa misafidy ...
Masinina fanasan-damba Samsung AI Fanaraha-maso vaovao - natambatra tanteraka
Izy ireo dia manafoana ny ora fanasana, mikarakara ny lamba ary manatsara ny fanjifana rano sy herinaratra - ireo no milina fanasan-damba Samsung vaovao sy fanamainana miaraka amin'ny tontonana AI Control vaovao. Misaotra ny fandidiana intuitive, ny mety hisian'ny fiaraha-miasa, ...
Inona no milina fanasan-damba lavorary nataon'i. Mpanjifa poloney? Valin'ny fikarohana Samsung
fanontaniana, fanadihadiana, milina fanasana lamba, Samsung
Samsung dia nanao fanadihadiana momba izay antenain'ny mpanjifa poloney amin'ny milina fanasan-dry zareo. Betsaka ny valiny isan-karazany tao amin'ilay fanadihadiana izay mety hahagaga anao. Ny milina fanasan-damba vaovao dia tsy maintsy manana lafin-javatra lehibe sasany. Masinina fanasan-damba vaovao ...
Samsung indray no mitarika ny tsenan'ny fahitalavitra
ambony, Samsung, fahitalavitra
Samsung dia nanjary mpitarika ny tsena fahitalavitra eran-tany nandritra ny fahadimy ambin'ny folo nisesy. Ny mpamokatra Koreana dia tsy nijanona nandritra ny taona maro ary tsy misy na inona na inona manondro fa hiova na inona na inona amin'ity lafiny ity. Samsung ao ...
Samsung dia namoaka ny fanavaozana One UI 3.1 ho an'ny finday avo lenta
aktualizacja, Samsung, finday avo lenta
Ny fanavaozana ny One UI 3.1 dia efa nahatratra ireo finday avo lenta an'ny Samsung. Manomboka izao dia azon'izy ireo ampiasaina izany, ankoatry ny hafa Smartphone Samsung Galaxy S20, Note 20, Galaxy Ab51 ary Z Fold 2. Samsung dia nikarakara ny zokiolona ...